Home ၊အညာနွေတမာမြေ: ကချင်ပြည်နယ်တွင်းက စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် ဒေလီမှာ ဆန္ဒပြ
ကချင်ပြည်နယ်တွင်းက စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် ဒေလီမှာ ဆန္ဒပြ
Posted by အညာနွေတမာမြေ anyarnwaytamarmyay at 4:43:00 PM
သောက် ကချင်တွေ လူပါးဝလို.
သူတို. အလံကြတော. ကိုင်ထားပြီး
မြန်မာ အလံကြတော. လမ်းမှာ ခင်းထားတယ် ။
ဒါ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်လား
သေအောင် အော် လိပ်ခေါင်းထွက်အောင်အော်
Jun 27, 2011, 10:16:00 PM